Mareykanka & Kenya oo si iskhilaafsan uga hadley colaada Koonfurta Soomaaliya – SBC
Mareykanka & Kenya oo si iskhilaafsan uga hadley colaada Koonfurta Soomaaliya
Dawladaha Kenya & Mareykanka ayaa si kala duwan oo khilaaf ka muuqdo waxay uga hadleen ku lug lahaanshaha wadamada reer Galbeedka gaar ahaan Mareykanka colaada ka aloosan Koonfurta Soomaaliya si gaar ah gulufka dagaal ee Kenya qaaday todobaad ka hor.
Wasaarada arimaha dibada Kenya ayaa sheegtey in hawlgalada ka dhanka Al-Shabaab ka soconaya Koonfurta Soomaaliya ay ka gaartey guulo wax ku ool ah taasi oo ku aadan inay u dhaw yihiin sidi ay gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose ee ay maamulaan xarakada Shabaabka.
Afhayeenka military-ga Kenya Maj. Emmanuel Chirchir, ayaa isaguna sheegay in xulufada ku gacan siinaysa hawlgalada ay wadaan oo ay dhici karto in midkood uu yahay Mareykanka ama Faransiiska ay ka dambeeyeen duqeyntii maalmo ka hor lagu qaaday fariisimo ay Shabaabku ku leeyihiin, taasi oo lagu laalyey sida uu hadalka u dhigay maleeshiyad ka tirsan Shabaabka.
Sidoo kale afhayeenku wuxuu sheegay in ciidamada badda Faransiiska gaar ahaan markab dagaal oo ay leeyihiin uu dhanka badda ka soo duqeeyey goobo ay ku sugan yihiin Shabaabka.
Laakiin hadalkan ka soo yeeray Taliska ciidamada Kenya ayaa waxaa iska fogeeyey saraakiil Mareykan ah oo magaalada Washington ka sheegay in ciidamada Mareykanka iyo hay’adooda sirdoonka ee CIA-da aanay dhawaanahan wax duqeymo ah ka geysan Soomaaliya.
Mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee arintan beeniyey oo si aad ah ula socda hawlgalada ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in gulufka colaadeed ee Kenya uu ku qasbay in badan oo ka mid ah sida hadalka uu u dhigay maleeshiyaadka Shabaabka & hogaamiyeyaashooduba inay baxsadaan taasi oo ku tilmaamay inay meesha ka saari gaarto hawlgal kasta oo ay maagan yihiin, waxaase uu dafiray in Mareykanku ay wax duqeymo ah ka geysteen Soomaaliya mudooyinkii la soo dhaafay.
Saraakiisha Faransiiska oo arintan la isku dayey in wax laga waydiiyo ayay ka gaabsadeen sida uu daabacay wargeyska New York Times.